Ikhaya / Blog / Yenza ikhitshi lakho licoceke ngeeMpompo zeKhitshi
2021 / 09 / 24 uhleloBlog 722 0
Iifompo zasekhitshini ziyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kwaye ujongeka ufumaneka ngokulula, kwaye ungazithenga ngokulula ezi mpompo zinomtsalane kwaye zisebenze kuyo nayiphi na ivenkile yehardware okanye impilo kwindawo ekufutshane nendawo yokugcina. Nangona kunjalo, kuhlala kucetyiswa ukuba kuthengwe iipompo zasekhitshini ezinophawu kwiinkampani ezaziwayo ekufuneka zinamandla amakhulu kwaye zenze amava abalulekileyo kunye neempompo ezinamandla zasekhitshini.
Abathengi banokufumana ngokulula amanzi ashushu nabandayo e-Antique Brass Faucets banokubanceda kakhulu. Ezi mpompo ziluncedo kakhulu kwaye zisebenza kakuhle kunokuba yimpendulo efanelekileyo ekucoceni lonke ikhitshi, kwindawo yokuhlamba iimpahla kunye neminye imisebenzi. Ezi mpompo zasekhitshini, nangona kunjalo, kufuneka zisetyenziswe ngendlela efanelekileyo yokwandisa imveliso kunye nokusebenza ngendlela efanelekileyo. Iipompo zinokufika ziluncedo kakhulu ukuba awukwazi ukugcina okanye ukuthatha unonophelo olufanelekileyo kwiipompo ezinokuthi zonakaliswe okanye zisilele.
Iimpompo ezikhanyayo neziqaqambileyo zekhitshi zihlala zongeza kwinkangeleko yekhitshi lilonke ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ezi zihlala zomelele kakhulu kodwa zibonelela ngeklasi eyongezelelweyo kunye nobuhle kwiitompu kunye nokuchaneka. Zenziwe ngezinto eziluncedo kakhulu nezisebenzayo ukubonelela ngemveliso ephezulu kunye nokuqina okukhulu kubasebenzisi.
Itompu yekhitshi egqityiweyo ikumgangatho ophezulu; ukugqitywa okuphuculweyo kulula ukubamba iintliziyo zokubona abathengi abanokubakho kwangoko. Umbhobho wokwenene wenziwe ngentsimbi engenasici ukuze kuphume imveliso kunye nokuqina kokuqina kobhedu okanye ialuminium. Ipompo efanelekileyo yekhitshi yobhedu yenzelwe ngokudibanisa amandla efashoni kunye nobugcisa bobuntu, emva kwezinto ezininzi ezikhutshiweyo.
Uncedo olukhulu lwezipili zokuhlambela zobhedu kukuba zizinto ezinganyangekiyo ngamanzi kwaye zithintela ukurusa okuyingozi. Kuyimfuneko ukukhanyela nawuphina umhlwa onokwenzakalisa ngoko nangoko itepu yakho. Kwelinye icala, ezi mpompo zekhitshi zobhedu zigutyungelwe yinkqubo entsha yesingxobo ebonelela ngemveliso eyandisiweyo kunye nokusebenza kubasebenzisi. Ingasetyenziselwa ngokulula ngaphandle koxinzelelo kunye nexesha.
Kwelinye icala, itepu yasekhitshini ayibonisi naluphi na uhlobo lwengozi kwezempilo kwaye iya kuba yindawo efanelekileyo yokusebenza onokuyisebenzisa ngaphandle kwengxaki. Itepu inoyilo lwala maxesha oluhle oluzisa inkangeleko entsha nengafaniyo nekhitshi lakho. Ngapha koko, unokuqiniseka ngobomi obubhetele ngaphandle kwesithintelo. Ezi mpompo zinokunciphisa amanqanaba oxinzelelo ekhitshini lakho.
Iinketho ezininzi zeGumbi lokuhlambela
Abantu abaninzi banokucinga ukuba ukufumana izinto ezifanelekileyo zokuhlambela kubonakala kulula njengepayi. Kodwa inyani yile, intloko yakho iya kujikeleza xa kufikwa ekukhetheni imveliso elungileyo kukhetho olungapheliyo. Iipompo zangasese ziye zajikeleza amashumi eminyaka kwaye azisebenzisi itekhnoloji ephucukileyo, kodwa kuthatha ukuqonda okuncinci ukukhetha isiqwenga esifanelekileyo. Akufanele ugxile kuyilo kunye ne-aesthetics ngaphandle kokumiselwa, uhlobo lwevalve, ukugqiba kunye nesitayile. Nangona kunjalo, zonke ezi zinto zibalulekile ekungafanelekanga ukuba zingahoywa.
Makhe sijonge ukuba le miba inganceda njani ekufumaneni eyona faucet ilungileyo kwigumbi lakho lokuhlambela.
Oku kuthetha ukuba uhlobo oluqhelekileyo lwetheyiphu nokuba lubekwe eludongeni okanye lwalunye. Imigaqo enxulumene ngokusondeleyo kuqwalaselo ihlala iphakathi kwintaba kunye nefomathi ebanzi. La magama ahambelana nobungakanani bompompo kunye nokuba ingakanani indawo egutyungelwe malunga nesinki. Ngomgama wee-intshi ezi-4 phakathi kwezibambo, olu hlobo lubizwa ngokuba luhlobo oluphakathi kwaye lufaneleke ngakumbi kwiisinki ezincinci nakwizindlu zangasese. Unokukhetha phakathi kweephatho ezibini kunye neeseti enye yokuseta. Imibhobho ebanzi inezibambo ezi-2 zamanzi ashushu nabandayo, neziphatho ezibekwe umgama omncinci oyi-6 in. IZura kunye neDryden zizinto ezilungileyo onokukhetha kuzo, ke ukuba unendawo yokuhlambela enkulu, isinki okanye isitopu, unokwenza ukhetho malunga noku.
Alithandabuzeki elokuba umpu womgangatho ofanelekileyo uza kuhlala ixesha elide. Ukhetho lwezixhobo ludlala indima ebalulekileyo apha. Ibrass ihlala isetyenziswa kwaye ixabiso lilungile. Eyona nto inexabiso eliphantsi yiplastikhi, enokudanisa ngokwenkonzo. Olona hlobo luchanekileyo lwevalvu lisebenzisa itekhnoloji yevalvey yokucinezela, esebenzisa into efana nesikrufu ukwahlula amanzi ashushu nabandayo kwisibambo. Kuba isebenza ngegasket yerabha, amathuba okuba iya kunxiba ngokukhawuleza kwaye ifuna ulondolozo ngakumbi. Kwiimpompo ze-single-lever, kusetyenziswa izivalo zebhola. Bavumela amanzi abandayo kunye ashushu anokudlula kwispout ukuba adibane. Kukho iindawo ezingaphezulu kwaye akukho zihlambi. Ivaluva zeCartridge zisebenzisa iindawo ezimbalwa kwaye zisebenzisa umkhono ongenanto. Banxiba ngokukhawuleza. Iiceramic disc valves ezisebenzisa iidiski ezi-2 ezilawula ukuhamba kwamanzi kunye nezenzo phakathi kwazo zezona zilungileyo xa kufikwa kuzinzo lweentlobo ngeentlobo zezivalo zeepompo zangasese.
Uya kubhuqwa ngenxa yokhetho xa kufikwa kwiindidi zemiphezulu efumanekayo kwimarike yeepompo zangasese. I-Nickel, i-chrome, ubhedu, i-rubber, i-bronze bronze, i-satin yegolide, kunye ne-oyile ye-bronze ye-rubbed ezinye zezinto eziqhelekileyo. Unenkqubela yemibala onokukhetha kuyo. Into ekufuneka ugxile kuyo kukugqitywa kobuso. Khangela ukufakwa komphunga ngokwasemzimbeni okanye ukugqitywa kwePVD. Isidingo sokufumana eli nqaku kukuba benza ukuba iimpompo zakho zibonakale zintsha kwaye ziyakhuhla. Unokukhetha imibala emininzi apha. Unokukhetha kwakhona iifomthi ezifakwe nge-chrome, ngakumbi ukuba ufuna ubhedu. Oku kuyakuxhathisa ukujika kombala kunye nokubola. Kukho izinto ezigqityiweyo ezaziwa njengokugqitywa kwamabala, ezinje ngokurabha ngesandla okanye ngeoyile erubhiweyo yeoyile. Azigutyungelwanga phantsi kwewaranti kwaye aziboneleli ngatywina lokukhusela kwitephu.
Uyilo olusebenzayo lwetephu yinto ebonakalayo yombhobho. Zininzi iintlobo kuxhomekeke kwisiphatho osikhethileyo. Uhlobo lwe-gooseneck luhlala lukhethwa kuba lubonelela ngemisebenzi eyahlukeneyo. Izitshizi, ukhetho olungenazandla kunye noyilo olunamanzi amancinci ityhubhu nawo ayathandwa. Iimpompo ezineengalo ezichazayo zikwanendawo kwindawo yangasese kuba kulula ukuzisebenzisa.
Ukuba kunokwenzeka, khetha zombini isinki kunye nompompo ukuqinisekisa ukuba ziyahambelana. Iipompo kunye neeshawari Kukho uluhlu olunomtsalane kunye nesitayile esinokubakho okukhulu kulondolozo lwamanzi kunye nokwenza lula komsebenzisi.
Ngaphambili :: Indawo yokuphekela Indawo yokupompa-Ukukhetha elungileyo next: Iingcebiso ngokugcina iiBhobho zakho zangasese zingenabala kwaye zivuza simahla
2021 / 09 / 25 2026